तपाइँको एन्ड्रोइड स्मार्टफोनको DPI मान र CPU प्रकार कसरी जान्ने Androidsis
ईडर फेरेनो | | APK, एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू, ट्यूटोरियलहरू
पक्कै पनि जब तपाईं मार्फत जानुहुन्छ एक एपीके डाउनलोड गर्नुहोस् तपाइँको स्मार्टफोनको लागि, apkmirror मा हुन सक्छ, तपाइँले एक राम्रो पाउनु भयो बिभिन्न संस्करणहरूको विविधता त्यो अनुप्रयोगको संस्करण जुन तपाईं आफ्नो स्मार्टफोनमा स्थापना गर्न चाहानुहुन्छ। सीपीयूको वास्तुकला र स्क्रिनको डीपीआई विभिन्न प्रकारका एपीकेका लागि देखा पर्दछ, त्यसैले तपाईं जुन संस्करण डाउनलोड गर्नुहुन्छ डाउनलोड गर्नुहोस् भन्नेमा श doubts्का लाग्नेछ।
यो यही कारणका लागि हो कि हामी तपाईंलाई यो प्रश्न जान्नको लागि समाधान गर्न मद्दत गर्नेछौं DPI मान के हो तपाइँको स्मार्टफोनको स्क्रीन र तपाइँ प्रयोग गर्नुहुने प्रोसेसरको प्रकार। यस तरीकाले तपाईलाई ती सबै एपीके डाउनलोड गर्न अब समस्या हुनेछैन जुन हामी सामान्यतया यी रेखाबाट साझा गर्दछौं र त्यो जुन वेबसाइटलाई धन्यवाद माथिको माथिको कुराले हामीलाई अनुप्रयोगलाई उनीहरूको भर्खरको संस्करणहरूमा अपडेट हुन अनुमति दिन्छ।
1 स्क्रिनको DPI मान कसरी जान्ने
1.1 DPI के हो?
1.2 DPI कसरी परिवर्तन गर्ने
2 तपाइँको स्मार्टफोनमा प्रोसेसरको प्रकार कसरी जान्ने
2.1 मेरो मोबाइलमा कुन प्रोसेसर छ भनेर कसरी थाहा पाउने?
2.2 सबै त्यो डाटा के देखा पर्दछ
स्क्रिनको DPI मान कसरी जान्ने
यदि तपाइँ निश्चित हुनुहुन्न DPI मान स्क्रिनमा यी सरल चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्
DPI परीक्षक अनुप्रयोग स्थापना गर्नुहोस् तपाईंको एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा
विकासकर्ता: निक निक विकास, LLC
हामी अनुप्रयोग सुरूवात गर्दछौं र मुख्य स्क्रीन हाम्रो अगाडि खुल्छ
उही स्क्रिनमा क्लिक गर्नुहोस् रaपप-अप विन्डो तपाइँको स्मार्टफोनको DPI को साथ
DPI के हो?
DPI डट्स प्रति ईन्च को मतलब हो, स्पानिशमा डच प्रति इन्चको रूपमा अनुवाद गरिएको, स्पानिशमा पीपीपीको रूपमा पनि चिनिन्छ, जुन स्मार्टफोनको विशेष विवरणहरूमा हेर्न सामान्य छ। यो शब्दले हामीले स्क्रिनमा देखेका सामग्रीको आकारलाई जनाउँछ। थप रूपमा, यो सम्भव छ प्रयोगकर्ताहरूले यी मानहरूलाई कुनै पनि समयमा समायोजन गर्न, हामीलाई सामग्री अवलोकन गर्ने तरिका परिवर्तन गर्न अनुमति दिदै।
Android मा DPI बदल्नुहोस् तपाईंलाई प्यानलको पूरा फाइदा लिन अनुमति दिन्छ, विशेष गरी ठूलो स्क्रिनको साथ। यस तरीकाबाट, हामी फोन स्क्रिनमा अधिक वा कम सामग्री हेर्न छनौट गर्न सक्दछौं। तिनीहरूलाई परिवर्तन गर्ने तरीका सरल छ, किनकि Android .7.0.० नौगटबाट हामी तिनीहरूलाई उपकरण सेटिंग्सबाट परिमार्जन गर्ने सम्भावना छ। त्यसोभए यो त्यस्तो अवस्थामा सजिलो हुन्छ।
DPI कसरी परिवर्तन गर्ने
फोनमा DPI परिवर्तन गर्नका लागि, तपाईले पहिले विकासकर्ता विकल्पहरू सक्रिय गर्नुपर्नेछ। यो फोनको सूचना सेक्सनमा, सेटिंग्समा गएर गरिन्छ, जहाँ तपाईले फोनको कम्पाईल नम्बरमा क्लिक गर्नुपर्दछ। सामान्य कुरा यो हो कि तपाईंले त्यस नम्बरमा सात पटक प्रेस गर्नुपर्नेछ, जसले गर्दा फोनमा विकासकर्ता विकल्पहरू सक्रिय भइसकेका छन् भन्ने सन्देश स्क्रिनमा देखा पर्नेछ।
जब हामीले यो गरेका हुन्छौं, हामी ती विकास विकल्पहरू प्रविष्ट गर्दछौं। सामान्यतया, DPI परिवर्तन गर्ने सेक्सन त्यो भनिदैन। हामीले गर्नु पर्छ नामहरू न्यूनतम चौडाई वा सबैभन्दा सानो चौडाइको रूपमा फेला पार्नुहोस्। Usually 360० सामान्यतया मानक हुन्, यदि हामी स्क्रीनमा अधिक सामग्री हेर्न चाहन्छौं भने हामी त्यसलाई 411११ वा 480० सम्म बढाउन सक्छौं। यदि हामी कम हेर्न चाहन्छौं भने हामी तिनीहरूलाई कम गर्छौं। यो परीक्षणको कुरा हो कुन विकल्पले तपाईंलाई सबैभन्दा बढी विश्वस्त पार्दछ।
तपाइँको स्मार्टफोनमा प्रोसेसरको प्रकार कसरी जान्ने
यहाँ हामी DIP परीक्षक जत्तिकै सजीलो जानकारी फेला पार्न सक्दैनौं, तर हामी गर्नेछौं केहि छोटो चरणहरूमा हामी जान्दछौं।
हामी अनुप्रयोग स्थापना गर्दछौं Droid हार्डवेयर:
Droid हार्डवेयर जानकारी
हामीले यसलाई सुरू गर्‍यौं र अगाडि बढ्यौं "प्रणाली" (माथिल्लो ट्याब)
हामी हेर्छौं "सीपीयू वास्तुकला" र "निर्देशन सेट"
मेरो मामला मा यो छ एआरएम।
यी तीन सम्भाव्यता हुन्:
एआरएम: ARMv7 वा armeabi
ARM64:: 64: AArch64 वा आर्म 64
x86: x86 वा x86abi
त्यसोभए तपाईं apkmirror को माध्यम बाट जान सक्नुहुन्छ र डाउनलोड गर्नुहोस् उपयुक्त संस्करण अनुप्रयोगको संस्करणको तपाईं प्रमुख अनुकूलता समस्या बिना चाहानुहुन्छ।
मेरो मोबाइलमा कुन प्रोसेसर छ भनेर कसरी थाहा पाउने?
यदि हामी प्रोसेसर जान्न चाहन्छौं जुन हाम्रो स्मार्टफोनले प्रयोग गर्दछ, त्यहाँ केहि विधिहरू उपलब्ध छन् जुन वास्तवमै सरल छ। एकातिर, हामी यसलाई उपकरणमा जाँच गर्न सक्दछौं। धेरै Android फोन हामीलाई यो विकल्प दिन्छ, यदि हामी गयौं भने टेलिफोन सूचना सेक्सनमा (फोनको बारेमा उर्फ) सेटिंग्समा। यस सेक्सनमा हामी फोनको बारेमा डेटा भेट्टाउँछौं, जस मध्ये सामान्यतया प्रयोग गरिएको प्रोसेसर हो।
अर्कोतर्फ, हामी यसलाई सँधै अनलाइन हेर्न सक्दछौं। प्रोसेसर के हो भनेर पत्ता लगाउन Google मा तपाईंको फोनको नाम प्रविष्ट गर्नुहोस्। यन्त्रका विवरणहरूमा यो जानकारी सँधै देखाइन्छ, या त हाम्रो वेबसाइटमा जब हामी फोनको बारेमा कुरा गर्छौं वा ब्रान्डको आधिकारिक वेबसाइटमा।
सबै त्यो डाटा के देखा पर्दछ
हामी देख्न सक्दछौं कि यदि हामीले अनुप्रयोग प्रयोग गर्‍यौं जुन हामीले माथि उल्लेख गर्यौं, प्रोसेसरको बारेमा धेरै विवरणहरू बाहिर आउँदछन्। यी सर्तहरू कहिलेकाँही बुझ्नको लागि जटिल हुन्छन्, विशेष गरी प्रयोगकर्ताहरूका लागि जसले स्मार्टफोनको यस संसारमा पहिलो कदमहरू चालिरहेका छन्। तर ती चीजहरू हुन् जुन बुझ्न गाह्रो छैन, यसकारण हामी तपाईंलाई तल उनीहरूको बारेमा बढी बताउनेछौं, ताकि तपाईं स्पष्ट विचार प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ:
न्यूक्ली: प्रोसेसर कोर ती हुन् जुन प्रोसेसरले प्राप्त गरेको अर्डरहरू कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार हुन्छन्, फोनमा कार्यहरू गर्न र सबै समयमा प्रदर्शन गर्न। विगतमा हामीले आफैंलाई धेरै प्रोसेसरहरू भेट्टायौं, तर उनीहरू सानो र सानो भएकोमा धेरै कोरहरू समान प्रोसेसरमा एकीकृत भएका छन्। सामान्य कुरा यो हो कि तिनीहरू काम गर्ने गति केही न्यूक्ली वा समूहहरू बीच भिन्न हुन्छ।
Chipset: यो प्रोसेसरको वास्तुकलाको आधारमा डिजाइन गरिएको इन्टिग्रेटेड सर्किटहरूको सेट हो र मदरबोर्डमा एकीकृत हुन्छ। यसको मुख्य कार्य भनेको उपकरणमा हार्डवेयर कार्यहरू गर्नु हो। हामी भन्न सक्दछौं कि यो यस अवस्थामा फोनको मुटु हो, किनकि यो सूचना संकलन गर्न र सम्बन्धित पार्टीलाई पठाउन जिम्मेवार छ ताकि कुनै कार्य वा कार्य सम्पन्न गर्न सकियोस्।
घडी आवृत्ति: फ्रिक्वेन्सीलाई दर्साउँदछ जहाँ ट्रान्जिस्टरहरूले मेक अप प्रोसेसर खोलिएको छ र एक विद्युत प्रवाह को प्रवाह बन्द।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » ट्यूटोरियलहरू » कसरी एपीके डाउनलोड गर्न DPI मूल्य र तपाइँको स्मार्टफोनको प्रोसेसर को प्रकार थाहा छ
तानोलाई जवाफ दिनुहोस्